दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर कति पर्नु भर ? | दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर कति पर्नु भर ? – हिपमत
दिनभरि क्वारेन्टाइन, रात परेपछि घर कति पर्नु भर ?
महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका–२ स्थित अनबर रेजा मदर सामा सञ्चालित क्वारन्टाइन, जहाँ ४० जनाजति मात्रै अट्न सक्ने भए पनि १६५ जनालाई राखिएको छ । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर
यो समाचार आज कान्तिपुरमा प्रकाशन गरिएको ।